Posted by မေဓာဝီ at 4:36 PM
တဂ်ကို အခုလိုလို အရှည်ကြီး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊
လာမယ့် သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး နှစ်သစ်မှာ အကြိုက်တကာ အကြိုက်ဆုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ။
မကြိုက်တာတွေ ဖတ်ရင်း နဲ့ ဘာတွေ များ ကြိုက်ပါလိမ့် လို့စဉ်းစားနေတာ နောက်ဆုံးတော့ အဟင်း.. အကုန် ကြိုက်သွားလို့ တော်သေးတာပေါ့နော်...
မြန်မာပြည် ခရီးသွားရင်တော့ လွတ်လပ်တယ် ဆိုပြီး ဘောင်းဘောင်း လေး ဝတ်မယ်မကြံနဲ့ .. မှားပြီသာမှတ်..
ဟိုးနှစ်ပိုင်းက ပုဂံ သွားတယ် ကားပေါ်မှာ ညီမ ၂ဝမ်းကွဲ မြန်မာတိုင်း က သတင်းထောက်လုပ်နေတဲ့ ညီမ နဲ့ နောက်တယောက် ပါလာတယ်..
ဂျင်းဘောင်းဘီလေး တွေကိုယ်စီ နဲ့ ရွှေစင်ဦး ကတော့ ပေါက်တော ရောက်တိုင်း သူတို့ကို သတိထားကြည့်နေတယ်.. ဟီး.. ဟီး မပေါက်ကြဘူးဗျ.. သနားလိုက်တာ
ညီမရေ စာအုပ်ချစ်သူ အတူတူ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်နော်... နောက်တော့ စာအုတ်ထက် ချစ်ရမဲ့သူ ကြိုက်ရမဲ့သူ ရှိလာရင်လည်း သတင်း စကားလေး ကြားပရစေ
4/08/2010 6:16 AM
တဂ်ပြီးတော့မှ မမေ မအားရင် အားနာစရာကြီးဖြစ်တော့မှာပဲ တွေးနေမိသား....
စာအရှည်ကြီး အားပါးတရဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မမေရေ...
အစားအသောက်ကတော့ တို့လဲ ငယ်တုန်းက မမေအတိုင်းပဲ... တခုခုဆို မစားခင် ကျောက်ကြည့်သလိုကြည့်တယ်လို့ မေမေတို့ကပြောတယ်... လူကလဲ အဲဒီတုန်းက ပိန်ညှောင်ရိုး...
အခုတော့ တွေ့သမျှအကုန်စားလို့ စည်ပိုင်းလိမ့်လာတယ်လို့ ပြောစရာဖြစ်နေပြီ....ဟီး..
စာအုပ်ချစ်သူ မမေကို နောက်မှ စာအုပ်လက်ဆောင်လေး ပေးပါတော့မယ်...
ငပိရည်နဲ့ ဂေါ်ဖီထုတ်သုပ်တဲ့... စဉ်းစားကြည့်လို့တောင်မရဘူး။ မဖတ်ခင်ကထဲက သိပြီးသားပါ။ စာအုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုတာ.... :)
အကြိုက်ဆုံး ဘာလဲ မသိသေးပေမယ့် စာအုပ်ကိုင်ဖတ်ရတာတော့ တော်တော် သဘောကျတယ်။ ဘေးမှာ ကော်ဖီခွက်လေးနဲ့ ဆို ငြိမ့်နေတော့တာပါပဲ။
ဗူးသီးကျော်အခွံကြိုက်သလို ဒူးရင်းသီးအခွံကြိုက်ရင် ဒွတ်ခ..မကြိုက်တာတွေဖတ်လိုက်ရတာ..ဖတ်ဖတ်မောသွားမှ...အကုန်ကြီုက်သတဲ့...မှားပါတယ် ဒေါ်လေးမေရယ်...
ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ငါးကျီးငါးခူကြိုက်တယ်။ အစပ်မစားနိုင်ဘူး။
အခုချိန်ထိ အခါးကို မကြိုက်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်တုန်း။
4/08/2010 11:51 PM
အနော်လည်း...... အဲ့သလိုပဲ...စားစရာတွေကို ငယ်ငယ်က ရွေးခဲ့တာ......။
(အနော့်တက်ဂ်ကို အေးဆေးရေးပါဗျ.....။ ကြွေးတင်ရင်လည်း...... အတိုးမတောင်းပါဘူးဗျာ........း))
4/09/2010 3:52 AM
"ဒီခရီး ဒီထီးနဲ့၊ ဒီအရပ် ဒီဖိနပ်နဲ့ ဆိုသလို သူ့နေရာနဲ့သူ သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ရွေးချယ် ၀တ်ဆင်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။" I ware longgyi every time when I visit Myanmar. It's too hot to ware jean or long pant.
4/09/2010 4:41 AM
တော်သေးတာပေါ့ မမေရယ် ..ငပိရည်လေး ကယ်ပေလို့ ပဲ ...
ဟုတ်ပ နော် ။ စာအုပ်လေးကိုင်ဖတ်ရတဲ့ အရသာ ကို အီးဘုတ် ဖတ်တဲ့အရသာ နဲ့မယှဉ်နိုင်ဘူး ။အသစ်တွေဘယ်လို ကောင်း .. အဟောင်းကိုပဲတလည်လည် ဆိုတာ မှန်လိုက်ထာလေ ..
မေရေးတာတွေ ဖတ်ပြီး အမက လိုက်မှတ်နေတာ… မေ ဒီလာလည်ရင် ဒါတွေ မကြိုက်ဖူးဆိုတာ မှတ်ထားမှဆိုပြီးလေ… ပြီးတော့ ဘာများကျွေးရင် ကောင်းမလဲဆို စဉ်းစားနေမိသေးတာ… အမလဲ စာအုပ်ကို စာအုပ်လို ဖတ်ရတာကို သိပ်သဘောကျတာ… ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးနဲ့အေးဆေးတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ လဲလျောင်းပြီး ပြင်ပလောကကြီးကို မေ့နေရတာလောက် အရသာရှိတာ မရှိဘူး… စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုနဲ့ု အာဟာရဖြစ်ဖို့ အတွက် အထောက်အကူ အများကြီးပေးတဲ့ စာအုပ်လေးတွေတဲ့လား… ရေးတတ်လိုက်တာမေရယ်… (btw, မျက်မှန်လေးတက်ရတယ်လား… စာတွေသိပ်လုပ်ရလို့ ထင်တယ်… အရင်က အမမတွေ့ မိသလိုပဲ)
4/11/2010 12:53 AM